Shiinaha kartoo 17 inches Laptop boorsada saarayaasha, shirkado, Warshad - Xigasho - Dongguan Zhihao Boorsada Warshadaha Co., Ltd.
Guri > Boorsooyin > Boorsada kumbuyuutarka > 17 inji boorsada Laptop
Boorsada laptop-ka ah ee 17 inch ah
1.Boorsada laptop-ka ah ee 17 inch ah product introduction:
(1) Boorsadan laptop-ka ah oo 17-inch ah waxay ka samaysan tahay 900D maro Oxford ah oo aan biyuhu xirin, kaas oo xoqan u adkaysta, laalaab-u adkaysiga u leh, biyuhu xireen, wuxuuna leeyahay xoog silig.
(2) Dhabarka iyo gunta suunka waxaa laga sameeyay dhar mesh tayo sare leh. Maadadani waxay leedahay astaamaha neefsashada, dhuuqmada dhididka, iyo hawo qaadashada. Qaybta dambe ee ka samaysan xumbo xusuusta leh qaybta dambe ee boorsada waxay yareysaa culeyska isticmaalayaasha waxayna kordhisaa raaxada isticmaalka.
(3) Gudaha shandadan laptop-ka ah oo 17-inch ah waxay ka samaysan tahay dhar-caag-buluug ah, kaas oo leh gacmo aad u fiican oo leh waxqabad aad u fiican marka loo eego nolosha adeegga iyo xoog-qabsiga.
(4) Qeybta dambe ee boorsada waxaa loogu talagalay howl lagu hagaajin karo usha jiida ee kiiska gawaarida, taas oo si wax ku ool ah u yareyn karta waqtiga xamuulka isticmaalaha. Isla mar ahaantaana, waxaan sidoo kale u qaabeynay bacda la-dagaallanka xatooyada dhinaca dambe, iyo in waxyaabaha qiimaha leh la dhigo boorsada ka hortagga xatooyada waxay si wax ku ool ah uga hortagi kartaa khasaaraha.
(5) Boorsadan laptop-ka ah ee 17-inch ah waxay si wax ku ool ah u keydin kartaa laptop-ka 17.3-inji ah, oo ay ku jiraan qalabkiisa durugsan.
(6) Boorsadan kumbuyuutarka, waxaan si taxaddar leh u soo xulnay jiinyeerka YKK oo leh xoog xoogaa qaniinyo ah si loo hubiyo in howlaha jiinyeerku uusan si fudud u dhaawici doonin, isla markaana loo isticmaali karo si habsami leh iyada oo aan laga gaabin, isla markaana uu leeyahay khibrad ka sii wanaagsan ee adeegsadaha.
) Naqshadeynta ballaarinta waxaa loo isticmaali karaa si dabacsan.
(8) Waxaan sidoo kale ku qalabaynay shandadan kumbuyuutarka kumbuyuutar ku xiraya dibedda, kaas oo si fudud loogu soo oogi karo adoo ku xiraya fiilada lacag bixinta. Ujeeddada ayaa ah in adeegsadayaashu ay u baahan yihiin inay iyagu iskood u jaangooyaan koronto ku shaqeeya polymer oo la isku halleyn karo.
(9) Iyadoo aan loo eegin xulashada alaabta ceyriinka ah, tikniyoolajiyadda tolidda, xakamaynta tayada wax soo saarka, iyo naqshadeynta baakadaha, waxaan si taxaddar leh u doorannaa shandaddan. Ujeeddada ayaa ah in loo oggolaado isticmaaleyaasha inay yeeshaan khibrad wanaagsan.
(10) Boorsadan laptop-ka ah ee 17-inch ah ma hayn karto oo keliya laptops iyo alaabada durugsan, laakiin sidoo kale waxay hayn kartaa buugaag, dukumiintiyo, musqulaha, dharka, boorsooyinka iwm, oo aad u xoog badan.
2.Boorsada laptop-ka ah ee 17 inch ah product parameters (specifications)
Safarka, safarka ganacsiga, ganacsiga, wakhtiga firaaqada, shaqada
Polyester suuf Oxford maro
Dhererka 30cmX Width 14cmX Dhererka 45cm
3.Boorsada laptop-ka ah ee 17 inch ah product features and applications
(1) Boorsadan laptop-ka ah ee 17-inch ah waxay leedahay astaamaha biyuhu, iska caabbinta xoqida, yareynta culeyska, nuugista shoogga, iska caabbinta, nolosha adeegga dheer, iyo shaqooyin badan.
(3) Waxaad u isticmaali kartaa boorsadan laptop-ka ah oo 17-inch ah si aad si fudud ugu kaydiso laptop-kaaga shaqada iyo qalabka agabka ah, sida kiiboodhka, jiirka, U diskiga, moobilka moobaylka, iwm. , Waxaad sidoo kale rakibi kartaa dharka, musqusha, boorsooyinka, dalladaha, kilyaha iyo waxyaabaha kale ee uu adeegsadaha adeegsado safarada ganacsiga.
(5) Waxaan ugu talagalnay boorso anti-xatooyo ah shandadan laptop-ka ah ee 17-inch ah. Isticmaalayaasha waxay ku ridi karaan waxyaabo qiimo leh boorsada ladagaalanka tuugada si looga hortago luminta ama xatooyada.
(6) Naqshadaynta boorsadani waa deeqsi iyo moodel, ku habboon dhammaan ragga iyo dumarka qaangaarka ah.
(7) Boorsadan laptop-ka ah oo 17-inch ah waxaa lagu qalabeeyaa dalool banaanka laga soo buuxiyo, kaas oo ka qaadi kara taleefanka gacanta wakhti kasta iyo meel kasta oo socodka ah. Si kastaba ha noqotee, isticmaaluhu wuxuu u baahan yahay inuu dhigo korantada korontada moobiilka booska ku habboon boorsada. Isticmaalayaashu waxay dooran karaan inay iswaafajiyaan korontada iyaga laftooda. Haddii isticmaaluhu uusan bixin karin bangiga korontada keligiis, waxaan ku siin karnaa bangiga awoodda polymer.
5. 17-inch baakad bacda laabta lagu qaato iyo gaarsiin ah
(2) Cabbirka hal baako ee caadiga ah: 45cm X 30cm X 14cm, waxaan u habeyn karnaa cabbirka baakadka naqshadeynta hadba baahidaada, si loo badbaadiyo xamuulka.
(3) faahfaahinta xirxirida: 48cm X 33m X 78cm.10PCS / kartoonka. Waxyaabaha kartoonka: K = K 5-lakab warqad jiingado qaro weyn leh.
(5) Miisaanka guud ee sanduuqa oo dhan: 12Kg.
(8) Haddii loo baahdo, waxaan qaabeyn doonnaa baakadka shaybaarka laptop-ka ah oo 17-inch ah sida waafaqsan shuruudahaaga.
(9) Hadaad ubaahantahay shaybaarka shandadan laptop-ka ah oo 17-inch ah, waxaan dooran doonaa inaan kuugu soo dirno diyaarad.
Q1: Maxay yihiin shuruudaha lacag bixinta?
S2: Ma waxaad tahay shirkad ganacsi ama soo saare?
Q3: Muddo intee le'eg ayaa dhalmadaadu tahay?
S4: Ma bixisaa baarka? Ma bilaashbaa mise waa dheeri?
Q5: Muddo intee le'eg yahay wareegga dhalmadaada?
S6: Ma leedahay xad MOQ ah?
Q8: Ma dooneysid naqshadeynta wax soo saarkayaga, ma sameyn kartaa waxna waad soo saari kartaa sida ku xusan sawirka qaabeynta?
S10: Waa maxay awoodda wax soo saarkaagu?
Calaamadaha kulul: 17 inji boorsada Laptop-ka, Shiinaha, soosaarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, habeysan, qiimaha, oraahda, keydka